🥇 Runako rwe salon
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 651
Vhidhiyo yekunaka salon manejimendi
Ronga runako rwe salon
Runako rwe salon manejimendi ndeimwe yematanho akasarudzika mukuita kwevanhu Semakambani mazhinji, ine zvimiro zvayo zvine chekuita nesangano, manejimendi, kufambiswa kwebasa uye kudzidziswa kwevashandi. Zvirongwa zvisina kuchengetedzeka zvekuchengetedza salon (zvakanyanya zvirongwa zve studio, izvo vamwe vanoedza kurodha mahara kubva paInternet) zvinowanzo kukonzera kukundikana, uye kushomeka kwemhando yepamusoro rutsigiro kunotungamira mukurasikirwa kwe data rakaunganidzwa uye rakapinda. Mune ramangwana, izvi zvinokonzeresa kushaya nguva kwevashandi yekuita zvemhando yepamusoro saroni, pamwe nemanejimendi, zvinhu uye accounting, manejimendi manejimendi uye kudzidziswa mune yerunako salon, etc. Mhinduro yakanakisa uye chishandiso kukwidziridza chiitiko che yako kambani mune iyi kesi ichave iyo otomatiki ye runako salon manejimendi. Kana kambani yako ichifarira kuronga yepamusoro-mhando manejimendi system (kunyanya, iyo system yevashandi manejimendi uye kutonga pamusoro pekudzidziswa kwavo), hazvigoneke kurodhaunura mahara paInternet. Iyo yakanakisa software chigadzirwa icho chinokwanisa kutsungirira neiri basa ndiyo USU-Soft runako salon manejimendi chirongwa, icho chinokubatsira iwe kushandisa otomatiki ezvinyorwa, accounting, vashandi uye manejimendi accounting mune irunako salon, uye nekuwedzera, kuchengetedza nenguva uye kudzora kwemhando yepamusoro parunako salon, uchishandisa ruzivo rwakawanikwa panguva yekumisikidzwa kwechirongwa chedu. Iyo USU-Soft runako salon manejimendi chirongwa chinogona kuvezwa uye nekubudirira kushandiswa nemakambani akasiyana siyana mune yekunaka indasitiri: runako salon, runako studio, nzara salon, spa nzvimbo, uye solarium, massage salon, nezvimwe iyo USU-Soft se runako salon manejimendi chirongwa chakazviratidza kuve chakanakisa muKazakhstan nedzimwe nyika dzeCIS. Musiyano mukuru pakati peiyo USU-Soft manejimendi chirongwa uye zvakafanana software zvigadzirwa ndiko kuri nyore uye nyore kwekushandisa. Basa racho rinokutendera kuti uongorore ruzivo rwese rwune chekuita nesalon yako zviri nyore.
Iyo USU-Nyoro seye runako salon chirongwa zvakaenzana zvakaenzana kumutungamiriri, maneja, runako salon tenzi, uye mushandi mutsva uyo anodzidziswa. Iyo sisitimu manejimendi manejimendi inobvumidza kuongorora mamiriro emusika, kuongorora tarisiro yekusimudzira yekambani. Mhando dzese dzemishumo dzakagadzirwa kubatsira maneja kuti aite izvi. Iyo runako salon manejimendi software ichave inokosheswa mubatsiri kune runako salon maneja mukudzora runako salon, sezvo ichipa ruzivo rwekuona rwekuita zvine mwero manejimendi sarudzo (semuenzaniso, kutsiva zvemukati, kuunza hutsva hutsva hwemasevhisi, kudzidzisa vashandi , nezvimwewo) munguva ipfupi inogoneka. Mune mamwe mazwi, iyo system yeotomation uye manejimendi yerunako salon inobatsira kukurumidza kugadzirisa, pamwe nekuisa uye kubuda kweruzivo. Iyo manejimendi chirongwa chinobatsirawo mukuongorora zviitiko zve runako saloni, iyo inosunungura iyo nguva yevashandi vako kugadzirisa mamwe matambudziko (ekudzidzira kugona mhando nyowani yechiitiko kuti uwedzere kushandisa hunyanzvi uye semhedzisiro, wedzera kukwikwidza kwe kambani yako). Kana iwe uine chitoro mune yako runako salon, iwe unowana akawanda maficha anobatsira mune rako basa. Iyo manejimendi module iyo iwe yaunoshandisa kazhinji kazhinji ndeye 'Kutengesa'. Paunopinda mumutsetse uyu, unoona hwindo rekutsvaga data. Kana paine zvakawanda zvekunyora, iwe unogona kunatsiridza yako yekutsvaga maitiro ekuvandudza rako basa. Iyo 'Tengesa Zuva kubva' munda icharatidza zvese kutengesa kutanga kubva pane yakatarwa zuva. Kuti uzviite, tinya museve pakona yekurudyi yemunda usina chinhu. Muhwindo rinowoneka, unogona kusarudza gore, mwedzi, zuva kana kuseta iro razvino zuva kamwe uchishandisa iro 'Nhasi' basa. Iyo 'Kutengesa zuva kune' munda inokutendera iwe kuratidza zvese kutengesa kune rimwe zuva. Iyo 'Client' munda inopa kutsvaga kweumwe munhu. Kuti usarudze mumwe mutengi, iwe unofanirwa kudzvanya pachiratidzo chine madonhwe matatu mukona yekurudyi yemunda. Mushure meizvozvo, manejimendi manejimendi anozvivhura otomatiki runyorwa rwevatengi database Mushure mekusarudza inodikanwa mutengi, tinya bhatani 'Sarudza'. Mushure meizvozvo, manejimendi application inongodzokera kune yapfuura yekutsvaga hwindo. Mushandi akaita kutengesa anoratidzwa mumunda we'Tengesa '. Uyu mushandi anogona kusarudzwa kubva pane runyorwa rwevashandi mune dhatabhesi. Iyo 'Yakanyoreswa' munda inoshandiswa pakutsvaga nevashandi vakanyoresa kutengesa mune software.
Ndeipi inonyanya kukosha mune chero bhizinesi rinopa masevhisi? Vazhinji vachati nzira ine chivimbo kune manejimendi, kubudirira mumakwikwi mumusika, kugona kukwezva vatengi. Pasina mubvunzo, inoita basa rakakosha. Asi zvakadaro, chinhu chakakosha ndechevatengi uye nyanzvi dzakanaka. Izvi zvinhu zviviri, pasina izvo kugona kuvapo kwekunaka salon zvisingaite. Izvo zvinodikanwa kukwezva sevatengi vakawanda sezvinobvira, uchishandisa nzira dzakasiyana dzekushambadzira, mabhonasi masisitimu, mitengo uye kukwiridzira Yedu runako salon manejimendi chirongwa ichakubatsira iwe mune izvi, sezvo iine anoyevedza mashandiro. Iyo manejimendi system inogadzira yakawanda nhamba yemishumo. Iwe uchaona izvo kushambadza kunoshanda uye kunokwezva vatengi uye izvo zvisingaite, kuti usashandise mari zvisina basa uye kuendesa kune izvo zvinoda bhizinesi rako. Kana pane mushumo unoratidza zvikonzero zvikuru nei vatengi vachisiya runako rwenyu salon. Iwe unonzwisisa kuti nei izvi zviri kuitika, uye mune ramangwana unoita zvese zvinobvira kuzvidzivirira. Izvo zvakakosha kwete chete kukwezva vatengi, asiwo kuchengetedza vatengi vekare. Kana vakashanduka kuita VIP vashanyi, vanova sosi yakavimbika yemari uye vanounza yakagadzikana purofiti. Izvo zvakakosha kukurudzira vatengi vakadaro kuti varambe vari vaenzi vako venguva dzose.